Ukuncibilika kwe-Arctic kuthinta indlela okudliwa ngayo amabhere asezindaweni eziphakeme | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuncibilika kwe-Arctic kuthinta ukudla kwamabhere asezindaweni eziphakeme
Amabhere wePolar, okuyizidlakela ezinkulu eNorth Pole, abe uphawu lokushintsha kwesimo sezulu. Kule ngxenye yomhlaba, izinga lokushisa lihlala lingama-degree angaphansi kuka-zero, ikakhulukazi, kusuka -43 kuye ku -26 degrees Celsius cishe. Ngakho-ke, lezi zilwane ezibabazekayo zikwazile ukuzingela izimvu zamanzi, okuwukudla kwazo okuyinhloko, ngaphandle kwenkinga enkulu, kepha ngokufudumala kwembulunga yonke isimo sakho sishintsha kakhulu.
Ngokuya ngocwaningo olushicilelwe kwi »Journal of Animal Ecology», baphoqwa ukuba badle amaqanda amadada, amahansi kanye nezinhlanzi zasolwandle ukusinda.
UCharmain Hamilton, ongusosayensi eNorway Polar Institute, uchaze ukuthi ngaphambi kokuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuqale ukuthinta iNorth Pole, iqhwa lomhlaba lahlala ezindaweni ezingasogwini ngasengxenyeni yeqhwa kwaze kwaba sekupheleni kwehlobo. Ngakho-ke, izimvu zamanzi zaziphumula eduze kwemishini yazo yokuphefumula kanti amabhere angazizingela.
Kodwa-ke, eSvalbard, iziqhingi zaseNorway ezise-Arctic Ocean, izinga lokushisa likhuphuke ngokuphindwe kathathu kunezinye izindawo zeplanethi yoMhlaba, ngakho-ke iqhwa liba ntekenteke kakhulu futhi libe yingozi, ikakhulukazi kumabhere asezindaweni eziphakeme.
»Njengoba ukuhlehla kweqhwa lasolwandle sekwenze kwaba nzima kubo ukuzingela izimvu zamanzi ezinemigexo, amabhere asezindaweni ezibandayo manje asebenzisa isikhathi esincane ezindaweni eziseduze nezinguzunga zeqhwa, ahamba amabanga amade ngosuku futhi chitha isikhathi esiningi ulenga kweminye imithombo yokudla, njengokufuya amakoloni amadada namahansiKusho uHamilton.
Ukudla okungu-90% kwalezi zilwane ezincelisayo kuncike kwezinye izilwane. Ngenxa yokuncibilika, baba nobunzima obuningi nokuningi bokuthola ukudla kwabo okuyisisekelo. Uma lokhu kuqhubeka, uchungechunge lokudla lungashintsha kakhulu luze lukucishe, njengoba inani lezinyoni lincane kakhulu uma liqhathaniswa nenani lamabhere asezindaweni ezibandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuncibilika kwe-Arctic kuthinta ukudla kwamabhere asezindaweni eziphakeme
Ishalofu elikhulu leqhwa laseLarsen C e-Antarctica selizophuka